Ukufakwa kwepaneli yealuminium
3. ingaqwalaselwa ibe ziimilo ezinzima.
Yintoni ipaneli yeAluminiyam?
Iphaneli yeAluminiyam ikwabizwa ngokuba yi-aluminium ipleyiti, i-aluminium veneer, i-aluminium khazi, kunye ne-aluminium olungaphambili, yenziwe nge-alloyum ephezulu, kwaye iqhutywa ngeendlela ezahlukeneyo zokwenza izinto ezinje ngokusika, ukusonga, ukugoba, ukuwelda, ukuqinisa, ukugaya, ukupeyinta, njl.
Njengokhetho oluphambili lokwakhiwa kwento, i-aluminium veneer inendawo ebanzi yophuhliso xa kuthelekiswa nezinto zangaphandle ezinje ngetera ye-ceramic, iglasi, ipaneli ye-aluminium edityanisiweyo, iphaneli yobusi kunye nemabhile.
Iphaneli yomdonga weAluminiyam yophahla ngokubanzi yonyango lwe-chrome, emva koko usebenzise unyango lwepeyinti ye-fluorocarbon. Iphaneli eqinileyo yeAluminiyam yipeyorocarbon epeyintiweyo kunye ne-varnished polyvinylidene fluoride resin enemibala eqinileyo kunye nemibala yentsimbi. Ngaba nokumelana ezibalaseleyo umhlwa kunye nokumelana yemozulu, imvula eneasidi, ityuwa zokutshiza kunye ezahlukeneyo ezingcolisa umoya, ukumelana egqwesileyo ashushu nabandayo, ukumelana radiation yelanga ngamandla, ixesha elide ukugcina non-ebunayo, non-chalking kwaye ixesha elide.
Yenzelwe ikakhulu iphaneli, ukuqina, ikona yealuminiyam kunye nezinye izinto
Ingxubevange yeAluminiyam: 1100 H24 / 3003 H24 / 5005
Iphaneli ubukhulu: 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm kunye 7.0mm
Ubungakanani bepaneli: 600 x 600mm, 600 x 1200mm, 1300 x 4000mm okanye ubungakanani obulungelelanisiweyo
Iphaneli yeAluminiyam ilungele ukuhonjiswa kodonga lwangaphakathi nolwangaphandle, indawo yokulinda, umhombiso wekholamu, ukugqitha kwabahambi ngeenyawo, ilifti yokubopha, ukugubungela ibhalkhoni, isilingi emile ngaphakathi ngaphakathi, njl. Njl. , izikhululo, isibhedlele, iopera, amabala emidlalo, indawo yokwenza umthambo kunye nezakhiwo ezide.
Xa kuthelekiswa nepaneli yealuminium edityanisiweyo, iipropathi zoomatshini zepaneli yealuminiyam ngokucacileyo zibhetele kunepaneli edityanisiweyo, kunye noxinzelelo lwayo lokumelana nomoya, ubomi benkonzo bungcono kunepaneli yealuminium edityanisiweyo. Ngaphezulu, iphaneli yealuminiyam ihlala iqulunqwe kwimveliso egqityiweyo kumzi-mveliso kwaye ifakwe kwindawo.
Iphaneli yeAluminiyam ngoku iya isiba pop ngakumbi kwihlabathi liphela, lukhetho lwakho lobulumko ngokwakha izinto zokuhombisa.